Shirkadda Imaaraadka ee DP World oo hanjabaad cusub ka bixisay go’aankii dawlada Jabuuti. – Xeernews24
Shirkadda Imaaraadka ee DP World oo hanjabaad cusub ka bixisay go’aankii dawlada Jabuuti.
12. September 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Shirkadada dekedaha Imaaraadka Carabta ee DP World ayaa shaaca ka qaaday inay qaadi doonto dhammaan tallaaboyinka sharciga ah, si ay u difaacdo saamiga ay ku leedahay dekedda Doraleh ee dalka Jabuuti, kadib markii saamigaas ay dowladda Jabuuti qarameysay.
“Jabuuti waxa ay si indho la’aan ah u jebisay sharciga caalamiga iyo qandraasyada ganacsi ee dunida” ayaa lagu yidhi warsaxaafadeed kasoo baxay DP World oo loo soo diray war baahinta caalamka.
“Maal-gashtayaasha dunida waa inay laba mar ka fakaraan maal-gaashiga Jabuuti, oo ay dib u qiimeeyaan heshiis kasta oo ay la galaan Jabuuti, sababtoo ah dowladda dalkaas ma xushmeyso heshiisyada, waxayna wax ka bedeshaa ayada oo aan cidna ogeysiin” ayay tidhi DP World.
Qoraalka ayaa lagu yidhi “iyada oo laga duulayo go’aanka ay horay madaxtooyada Jabuuti uga soo saartay iney gabi ahaanba maamulka iyo maareynta Dekedda Dooraale kala wareegtay maamulka Shirkadda PDSR ee maareynta dekedda gacanta ku haysay”.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/07/26-dubai_doraleh.jpg 257 600 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-09-12 23:54:512018-09-12 23:54:51Shirkadda Imaaraadka ee DP World oo hanjabaad cusub ka bixisay go’aankii dawlada Jabuuti.
Geelaha Jabuuti iyo ka Eritrea oo isku arkaya Magaalada Addis ababa. DAAWO Gabadh ay Cabdi iley isku qoys yihiin oo Ka Warantay Qaabka uu Dadka u...